Posted on Monday, der 16. March 2020 brycen_adminPosted in News and Events
Brycen Myanmrရဲ့အပန်းဖြေခရီးသွားခြင်းအမှတ်တရပုံရိပ်များ 2020 Brycen Myanmar ရဲ့ annual tripကိုတော့Brycen Myanmar Yangon နဲ့Brycen Myanmar Mandalayမှဝန်ထမ်းများအတူတကွငပလီကမ်းခြေကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။
Posted on Monday, der 30. July 2018 brycen_adminPosted in News and Events
၂၀၁၈ ဇူလိုင်လ ၂၆ရက်နေ့တွင် Brycen Myanmar Co.,Ltd ၏ဝန်ထမ်းများ အချင်းချင်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ညစာစားပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဌာနအသီးသီးမှ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသော ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် Internshipအဖြစ် လာရောက် လုပ်ကိုင်နေသော ကျောင်းသားများလည်း အတူတကွ ပျော်ရွှင်စွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။ ညစာစားရုံသာမက ဝန်ထမ်းများပိုမိုပျော်ရွှင်စေရန် ရည်ရွယ်ကာ အုပ်စုဖွဲ့၍ ဂိမ်းများကစားပြီး အနိုင်ရရှိသောအသင်း၃သင်းအား ဆုများပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ထားဝယ်ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်မှ ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း လက်ဆောင်ပေးအပ်
Posted on Thursday, der 28. June 2018 brycen_adminPosted in News and Events
4 June 2018 မှစတင် ၍ Brycen Myanmar Co.,Ltd မှ ထားဝယ်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်ေနာက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား (၉)ဦး အား အလုပ်သင် (internship) ပြုလုပ်ပေး ခဲ့ပါသည်။ အလုပ်သင်ကာလမှာ (၃)လဖြစ်ပါသည်၊၊
Brycen Myanmar Co.,Ltd မှvolunteers အနေဖြင့် DreamTrain Organizationကျောင်းသားများအား Computer Basic သင်တန်းအား 2018,May21မှစတင်၍ 5ရက်ကြာသင်ကြားခဲ့သည်။ Computer Basic သင်တန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းသား များအား Brycen Myanmar Co.,Ltd အား သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်များပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ လာရောက်သင်ယူသော အတန်းသားများမှလည်း Brycen Myanmar Co.,Ltd အား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း စာလွှာများ ရေးကာ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
Posted on Wednesday, der 16. May 2018 brycen_adminPosted in News and Events
Brycen Myanmar Co.,Ltd မှ ၂၀၁၈၊မေလ 5ရက်တွင်ဝန်ထမ်းများ ပိုမိုရင်းနှီးမှုရရှိစေရန်Tai Pot တွင် mini party ကျင်းပပေးခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်လူမျိုး MD နှင့်ဝန်ထမ်းများအားလုံးပျော်ရွှင်စွာပါတီဆင်နွှဲရင်းဓါတ်ပုံ များရိုက်ခဲဲ့ကြပါသည်။ ပျော်စရာကောင်းသော ပါတီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။